Hogaamiye yaasha ismaamulka Mandera oo balan qaaday la dagaala... | Universal Somali TV
Hogaamiye yaasha siyaasada ee dowlad goboleedka Mandera ee gobolka waqooyi bari kenya ayaa balan qaaday in ay kala shaqeyn doonan xukuumada kenya sidii loo cirirtiri lahaa kooxaha Argagixisada ee weerarada ka geysta Mandera.
Hogaamiye yaashan oo ka hadlay munaasabadii shalay loogu dabaal degayay maalinta geesiyada ee Mashuja Day ayaa waxay sheegeen in ay xooga saari doonan sidii loogu midoobi lahaa la dagaalanka Argagixisada.
Barasaabka ismaamulka Mandera cali Ibrahim roba oo ka hadlay madasha ayaa tilmaamay in ay wajahayaan weeraro halis oo kaga imaanaya shabab,kuwaasi oo uu ku tilmaamay in ay curyaamiyeen hormarka ismaamulkaas.
Dhanka kale waxaa uu tilmaamay in dagaal yahanada shabab ay shacabka kenyanka ah ku kala saaraan diimahooda,iyaga oo doonaya in ay kala qeybiyaan dalka kenya.
Mr Roba ayaa ugu danbeyn sheegay in kenyanka looga baahan yahay in ay gartaan waxa ay shabab ka sameynayaan gudaha dalka,oo uu sheegay in maalin walba ay dilayaan dad muslimiin ah oo aan waxba galabsan.
Kan-xigaTrump oo sheegay in aan la aqbali kar...
Kan-horeSawiro:Maalinta geesiyada kenya oo ma...
47,169,702 unique visits